Jiangxi Sanjia Craft Onyinye Co., Ltd. e guzobere na 2018, ya ụzọ, Koonmei Nka Products e guzobere na 2005 na Shenzhen. Anyị factory ugbu a na-ekpuchi ebe ndị 4,000+ square mita. Ọ dị nso na Poyang Lake nke bụ ọdọ mmiri mmiri kachasị ọhụrụ na China, ụlọ ọrụ anyị na-ekpori ndụ maka njem na gburugburu ebe obibi mara mma. Dị ka a emeputa nke ọgaranya ahụmahụ na ụlọ ọrụ nke metal crafts & onyinye, anyị na-elekwasị anya na-amị omenala ngwaahịa gụnyere enamel atụdo, lapel atụdo, baajị na akara, keychains, nrite, ego, nkịta mkpado, ibe edokọbara, wdg.
Na zuru ulo oru yinye, anyị nwere ike na-enye onye-nkwụsị ahaziri ọrụ na onwe ha rụchaa dum mmepụta usoro si digital artwork, mmemme, ịkpụzi, anwụ-mgbatị, zọ, polishing, sere, plating, gbakọta ka QC na mbukota. Nke a na-enye anyị nnukwu uru na ịnye njikwa ọnụ ahịa ziri ezi na njikwa njikwa maka ndị ahịa nwere ọnọdụ ahịa dị iche iche.
Ka ọ dị ugbu a, anyị emeriwo asambodo nke ISO9001 na TUV. Ọtụtụ n'ime anyị nwere mkpara mkpara nwere ihe karịrị afọ 10 ahụmahụ a na ubi na ha na-eme oké onyinye ka anyị ụlọ ọrụ na-enye ọkachamara ọrụ na afọ ojuju ngwaahịa anyị hụrụ n'anya ahịa n'ụlọ na mba ọzọ.
N'ihi na anyị bụ:
- Alibaba Verified Supplier;
- ISO na TUV akwụkwọ Factory;
- Akwadoro nke ọma maka Ọrụ Omenala Onye Nkwụsị;
- Self nwere plating ụlọ- dị iche iche plating agba dị;
- Idozi igwe na igwe ohuru ohuru, n’enye oru oma;
- Ihe ngosi ihe osise na nyochagharị n'efu;
- Ihe eji eme omenala, ewepu ebu na mbu ahia;
- Inye nyocha oge site na foto ma ọ bụ vidiyo tupu mbufe;
- Professional Staffs bụ mgbe niile Online na-eje ozi.
Gị ina bụ ihe mgbaru ọsọ anyị, gị afọ ojuju bụ anyị na-achụ, gị ịga nke ọma bụ anyị nnukwu ụtọ!
Nabata ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla iji tụlee ọrụ gịs.